लिभरपुल किन लगातार पराजित भइरहेको छ? – Your Online News Partner
लिभरपुल किन लगातार पराजित भइरहेको छ?
सेन्ट्रल डेस्क प्रकाशित मिति : ११ फाल्गुन २०७७, मंगलवार ०५:३७
इंग्लिस प्रिमियर लिगको उपाधि रक्षा गर्नेछ भनेर अनुमान गरिको लिभरपुल दुई साताअघि म्यानचेस्टर सिटीसँग फराकिलो अन्तरले पराजित भएको थियो।
गत साता पनि लेस्टर सिटीसँग लिभरपुल उस्तै अन्तरले पराजित हुन पुग्यो। हारको श्रृंखला यतिमै रोकिएन। शनिबार राति भएको खेलमा एभर्टनलाई लिभरपुलले नतिजा सुम्पियो।
आखिर लिभरपुलको टिममा खड्किएको खेलाडी उहिँ भर्गिल भ्यान डाइक मात्र हुन त भन्ने ठूलो प्रश्न चिन्ह प्रशिक्षक जुर्गन क्लोपको अगाडि पेस भएको छ। किनभने अहिले लिभरपुललाई धर्मसंकट परेको छ।
अहिले हप्तामा कम से कम पनि २ खेल हुने गर्छ, खेलाडीलाई प्रत्यक्ष रुपमा दवाब बढेको छ। मनोबल घटेको अवस्थामा खेलमा पुनरागमन गर्न कठिन हुन्छ। भ्यान डाइक घाइते भए लगतै लिभरपुलले जोए गोमेज र जोएल माटिप जस्ता आफ्नो भरपर्दा डिफेन्डर गुमाइसकेको छ।
३ सर्वोकृष्ट डिफेन्डर गुमाउदा लिभरपुल धर्मरहएको हो। अहिले भर्खरै लिभरपुलले २ जना कलिला डिफेन्डर भित्राएको छ। अबको बाँकी खेल लिभरपुलले उनै २ जना कलिला डिफेन्डरमा भर परेर खेल्ने बाहेक अरु कुनै उपाय छैन। भ्यान डाइक , गोमेज र माटिपले कुल मिलाएर जम्मा यस वर्ष २२ खेल मात्र खेलेका छन्।
अहिले सेन्ट्रल डिफेन्डरको अभाव टार्नको लागि फबिह्नो र हेन्डरसनलाई क्लोपले इमरजेन्सी डिफेन्डर बनाएका छन्। यसो गर्दा मिडफिल्डमा खेलाडी कम भएको कराणले गोलको पनि अभाव हुन पुगेको छ।
लिभरपुल इतिहास रच्ने क्रममा थियो, एन्फिल्ड अर्थात् होमग्राउन्डमा लिभरपुल ६८ खेलमा अपराजित थियो। तर अहिले लिभरपुलले ११ खेलमा ९ अंक मात्र बटुल्न सकेको छ।
लिभरपुलको खराब यात्रा सिजनको सुरुवातबाट नै भएको थियो। एस्टन भिल्लासँग ७ गोलको नतिजाले हार बेहोर्दा फूटबल पण्डिततहरू अचम्ममा परेका थिए। एक वर्ष यता लिभरपुल आफ्नो उत्कृस्ट खेलबाट चुक्दै आएकोमा दुई मत छैन।
यति हुँदाहुँदै पनि पर्तमान लिभरपुल टिमलाई सम्मान भने दिन पर्छ, पछिल्ला ३ वर्षदेखि टिमले अनुकरणीय नतिजाहरू दिएको थियो, एउटा खेलाडीले अर्को खेलाडीको खेल शैली निकै कुशल ढंगले बुझेका थिए। लिभरपुल त्यसरण पनि केहि वर्ष निकै उत्कृष्ट बनेको थियो। ३० वर्षमा पहिलो पटक प्रिमियर लिग चुमेको टिमले एकपछि अर्को बज्रपात महसुस गरिरहेको छ।
जुर्गन क्लोपले वार्यन म्युनिखबाट थिअगो अल्कन्तारालाई क्लबमा भित्राएको केहि खेल पछि नै विज्ञहरुले थिअगोले लिभरपुलको खेल केहि ढिला गराएको भनेका छन्। उनलाई लिभरपुलको छिटो र काउन्टर अट्याक खेल नरुचेको बताएका छन्। डिफेन्समा समस्या भएको कारणले पनि लिभरपुलमा उतारचढाव आएको हो।
खेलमा ४-३-३ लिभरपुल को नियमित खेल्ने शैली हो। अब यो शैली परिवर्तन गर्ने बेला आएको हो कि जस्तो देखिन्छ।
लिभरपुलले एउटै शैलीमा खेल खेलिरहेको करिब ३ वर्ष भइसक्यो र अब यो केहि पुरानो शैलीमाथि खेल पण्डितहरूले प्रश्न उठाउन थालेका छन्।
साथै टिममा अग्रपंक्तिका तीनै जना खेलाडीको उमेर ढल्किदै गएको छ। फिर्मिनो अक्टोबरमा २९ हुनेछन्। माने पनि अप्रिलमा २९ वर्ष पुग्दैछन भने सलाह जुनमा २९ हुने छन्। यो लिभरपुलको चिन्ताको बिषय भने होइन। तर तीनै जना भरपर्दा खेलाडीको एकै पटकमा उमेर ढल्किदा लिभरपुललाई मानसिक दबाब भने परिरहेको छ।
अहिलेको स्तिथिमा लिभरपुलको १० जना पहिलो रोजाइका खेलाडीहरु मैदान बाहिर छन्, टिममा संकट आइलागेको छ। भएका खेलाडी मै निर्बाह चलाउने बाहेक लिभरपुलसँग अर्को उपाय छैन। पछिल्ला वर्षहरुमा प्रसंशा नै प्रसंशा बटुलेका प्रशिक्षक जुर्गन क्लोपसँग केहि फरक रणनिती छ वा छैन भन्ने पनि ठूलो प्रश्न चिन्ह खाडा भएको छ।
सेन्ट्रल डेस्क	 14 mins ago